- Nchacha ihu kacha mma maka ụmụ nwoke -
Nzọụkwụ mbụ na ikekwe kachasị mkpa na usoro nlekọta anụ ahụ bụ nhicha. Ọ na -eme akpụkpọ ahụ gị ka ọ banye na ngwa ndị na -arụ ọrụ n'ime mmemme gị ndị ọzọ.
Enwere ọtụtụ ihe nhicha ihu ịhọrọ site n'ahịa taa. Ụmụ okorobịa, n'ụzọ kwere nghọta, nwere ike na -agwụ ike. Ọtụtụ ndị mmadụ amabeghị nlekọta anụ ahụ, mana nke ahụ apụtaghị na ọ ga -esi ike.
Asacha ihu dị mkpa maka ịlụso mmetụta ntụ, uzuzu, mmetọ, na mmebi anyanwụ na -eme n'ahụ.
Ọzọkwa, ịsacha ihu ndị nwoke nke ọma ga-ewepụ mmanụ na unyi n'akpụkpọ gị, mee ka ahụ gị dị ọcha na imekwa ahụ́.
Yabụ, ọ bụrụ na ị na -etinye oge dị ukwuu na mpụga, ọ dị mkpa ka ị sachaa ihu gị ka ị ghara imerụ ahụ site na uzuzu na mmetọ.
Nzọụkwụ mbụ na ikekwe kachasị mkpa na usoro nlekọta anụ ahụ bụ nhicha. Ọzọkwa, ọ na-eme ka akpụkpọ ahụ gị nweta ihe ndị na-arụ ọrụ na mmemme gị ndị ọzọ.
Ịghọta ihe akpụkpọ gị chọrọ bụ isi ihe na -ahọrọ ịsa ihu kacha mma maka ụmụ okorobịa. Eleghi anya ị na -achọ mmiri mmiri, ma ọ bụ ikekwe ị na -achọ nguzozi.
Ọzọkwa, enwere usoro maka ụdị akpụkpọ anụ ọ bụla nke na-agwọta nsogbu ụfọdụ. Enwere nhọrọ dịịrị gị n'agbanyeghị ọnọdụ ego gị.
Isiokwu a ga-enyere gị aka n'ịhọrọ ihu ịsa ahụ kacha mma maka ụmụ nwoke, n'agbanyeghị ma ị nwere akpụkpọ anụ ma ọ bụ akpụkpọ ahụ.
Tupu ị na -eme ọsọ ọsọ iji nweta asacha ihu kachasị mma maka ụmụ nwoke; N'okpuru bụ ihe ị kwesịrị ịtụle:
1. Ụdị Ụdị Ụdị akpụkpọ ahụ
Ịsa ihu kacha mma maka gị bụ ụdị akpụkpọ ahụ gị. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na-arịa ihe otutu, ị kwesịrị ịchọ usoro nke nwere ihe na-alụ ọgụ ihe dị ka salicylic acid ma ọ bụ ogbugbo willow.
Mmanụ na -agba ume na usoro ịchafụ nwere ike ịdị mma maka akpụkpọ akpọnwụ. Ụfọdụ ndị na -ehicha ihu nwere ike nyere aka ịlụso ihe mgbaàmà nke ịka nká ọgụ, ebe ha nwere ike chepụta ndị ọzọ maka akpụkpọ ahụ nwere mmetụta.
Nyochaa aha mmado maka nkwupụta ndị a metụtara mkpa gị pụrụ iche.
2. Ogo nke hydrating
Ebe ọ bụ na ịsacha ihu, n'agbanyeghị mbọ gị niile, nwere ike wepu ụfọdụ mmanụ na mmiri anụ ahụ gị, ọ dị mkpa iburu ngwaahịa nwere ihe na -enye mmiri mmiri iji lụsoo nkụ.
Agbanyeghị, enwere nhọrọ dị iche iche dabere n'ụdị akpụkpọ gị na ihe ị chọrọ. Mmanụ, ude, na bọta nwere ike ịba uru maka ụdị akpụkpọ anụ, ebe gels, glycerine na hyaluronic acid nwere ike ịba uru n'ụdị akpụkpọ anụ.
3. Ihe ndị na-adịghị ahụkebe ma ọ bụ na-akpasu iwe
Ebumnuche nke ịsa ihu bụ ikpochapụ unyi, nje, mmetọ, na sel akpụkpọ anụ nwụrụ anwụ. Mgbe ị na -ejigide anụ ahụ gị nke ọma na iru mmiri.
Ndị na-ahụ maka ntụrụndụ ịsacha ihu na -agbaze na mmiri wee nyere aka n'iwepụ unyi na mmanụ na akpụkpọ ahụ.
Agbanyeghị, ụfọdụ surfactants, na -eyi ihe karịa ndị ọzọ. Ndị na -eme ihe nkiri nwere ike keratin ma mepụta denaturation protein, na -ebute mmerụ ahụ akpụkpọ anụ keratinocyte.
Sulfates, nke kachasị n'ime ya bụ sodium lauryl sulfate, bụ ihe abụọ na-emepụta ihe iji zere.
Nchacha ihu kacha mma maka ụmụ nwoke
Ebe ọ bụ na enwere ụdị nhicha ihu dị iche iche maka ụmụ nwoke n'ahịa, ị ga -ahọrọrịrị nke dabara na ụdị akpụkpọ gị. N'okpuru ebe a bụ ndepụta nke ịcha ihu kachasị mma maka ụmụ nwoke:
1. Wepụ Ihu Ihu Ihu Detox kwa ụbọchị
Nke a mere ndepụta nke ịsa ihu kacha mma maka ụmụ nwoke.
Ọ bụrụ na ị na-achọ nhicha ihu dị ọnụ ala nke nwere ihe ndị sitere n'okike, ihe ịchọ mma mara mma a nwere ihe niile. Ihe nhicha ihu a na -ekwu na ọ na -edozi akpụkpọ ahụ ka ọ na -eji nwayọ na -emegharị ya na enzymes pọọpọ.
Ọzọkwa, ngwaahịa a nwere mmetụta ụfụfụ dị nro mana ọ naghị akpọnwụ akpụkpọ ahụ. Ihe nhicha a dabara adaba maka ụdị anụ ahụ niile, mana ọ kacha mma maka akpụkpọ agwakọta.
2. Agbachitere nlekọta ahụike akpụkpọ anụ nke Paula na-ehicha ihe nhicha gel-na-ude
Ihe nhicha a, nke bụ akụkụ nke Usoro agbachitere nke ika, kwere nkwa na ọ ga-abụ nlekọta anụ ahụ na-egbochi mmetọ.
Ọzọkwa, ọ nwere ike inye aka na mmebi ọkụ na-acha anụnụ anụnụ nke ikpughe ekwentị na kọmputa mgbe niile na-akpata. Ọ bụ ngwakọta dị nro nke na-ewepụ mmanụ dị n'elu na mmetọ.
3. Clarins Velvet na -ehicha mmiri ara ehi
Nke a mekwara ndepụta nke ịsa ihu kacha mma maka ụmụ nwoke.
Mgbe ụfọdụ ha na -ejikọ anụ ahụ kpọrọ nkụ ma nwee mmetụta nke ọma: ha abụọ na -aza ọtụtụ ngwaahịa "nkịtị", na -ahapụ ha nkụ ma ọ bụ gbaa ya ọkụ.
Ọzọkwa, mmiri ara ehi a na -ehicha bụ ihe nchacha siri ike nke na-ewepụ ihe mmetọ na unyi ma na-ahapụkwa akpụkpọ ahụ.
4. Kiehl's Calendula Deep Cleaning Foaming Face Wash
Nke Kiehl ejirila agwa calendula na-edozi ahụ nke ukwuu na-eme ka akpụkpọ ahụ sie ike, ahịhịa dị ka marigold nke dị na Mediterenian, dị ka ihe eji eme ihe kemgbe afọ 1960.
Ọzọkwa, ncha a nke na-enweghị ncha na nke na-arụ ọrụ nke ọma na-ekpocha ụfụfụ nke nwere calendula wepụ na-ejuju nke ọma, na-eme ka ọ dị nro ma na-edozi akpụkpọ ahụ n'ebughị ya mmanụ.
Ime ka ọ dabara maka akpụkpọ anụ ahụ mana ọ dabara nke ọma maka ụdị anụ ahụ nwere mmanu mmanu na nke nkịtị.
Mgbe ejiri mmiri rụọ ọrụ, udidi jel na-egbuke egbuke na-agbanwe ghọọ nnukwu ụfụfụ, na-ahapụ akpụkpọ ahụ ka ọ dị ọhụrụ, na-agba ume, na-adịkwa ka ị na-ehi ụra abalị kacha mma.
Ọzọkwa, Kiehl's calendula skincare solutions bụ akụkụ nke nnukwu nlekọta nlekọta akpụkpọ anụ calendula nke na-eji nnukwu ihe mejupụtara botanical (nke laghachiri na narị afọ nke 12).
A na -eji ya na mbụ na ụlọ ahịa ọgwụ ndị China. 230ml na -akwụ £ 25.50.
5. Nchacha ihu Horace na -asachapụ
Ụzọ na-enweghị isi na enweghị mkpasu iwe nke ụlọ ọrụ French a na-emefu ego na-adọrọ mmasị.
Otu n'ime ngwaahịa ya kacha ere ere bụ ịsacha ihu. Ọ na-asachapụ akpụkpọ ahụ yana na-achịkwa sebo, nke pụtara na ọ na-enyere aka ịchịkwa mmepụta mmanụ.
Ọ mejupụtara pasent 99 ihe okike, gụnyere unyi arụrụ arụ ọrụ nke Japan, yuka, aloe vera, zinc PCA, na glycerin sitere na osisi.
Ọzọkwa, mmetụta ya na-enye ume ọhụrụ, nke na-enye ume nwekwara ike inye aka ịmalite ụbọchị ahụ, karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-amalite na agụụ. Ọ dị mma maka ụdị anụ ahụ niile na enweghị paraben. £ 11 maka karama 200ml.
6. Njikwa mmanụ Nivea Men niile dị na asacha ihu 1
Ihe nchacha ihu a na-eleba anya n'ụdị okwu dị iche iche, gụnyere ntụpọ gbara ọchịchịrị, otutu, na oke mmanụ.
Usoro nhicha njikwa mmanụ dị iche iche na-eme ka akpụkpọ ahụ gị nwee ọmarịcha, mee ka ọ dị ọhụrụ, mara mma.
Ọzọkwa, ngwakọta apịtị jụrụ oyi ya na -asachapụ nke ọma ma na -ewepụ mmanụ na unyi dị ukwuu site na pores. Omume nhicha ya nke ọma na -ebelata ma na -egbochikwa isi ojii na isi ọcha.
N'ihi ya, ọ na-enye ọrụ njikwa mmanụ na-adịte aka. Ọ na -enyekwa aka igbochi ma gwọọ ihe otutu. Ọzọkwa, ngwakọta apịtị jụrụ oyi (nke nwere unyi sitere n'okike) na -asachapụ ma na -ewepụ mmanụ na unyi dị ukwuu na pores.
Tụkwasị na nke ahụ, ọ nwere ọrụ nchịkwa mmanụ na-adịte aka. Ọ na-egbochi ma na-ebelata ihe otutu, na-amụba akpụkpọ ahụ. Ọzọkwa, na-ewepụ ntụpọ gbara ọchịchịrị nke unyi kpatara. Na mgbakwunye, n'akụkụ osimiri, ọ na-enye ume ọhụrụ na oyi.
7. Nivea Men Dark Spot Mbelata Ihu Wash
Nke a ude rụọ ọrụ nke ọma ewepu ọchịchịrị tụrụ na -emekwa ka ọdịdị na mmetụta akpụkpọ ahụ ka mma. Ọ na -ewepụ ihe na -adịghị ọcha na mmanụ karịrị akarị ka ọ na -ebelata ntụpọ ojii na -akpata ntụpọ na ihe fọdụrụ.
N'ihi ya, ọ na -asachapụ nke ukwuu maka akpụkpọ ahụ na -acha ọcha.
A na -ewepụ ihe na -adịghị ọcha na mmanụ na -enweghị isi.
Na -asachapụ nke ọma maka akpụkpọ anụ
Na-achịkwa mmanu mmanu ruo awa iri na abụọ.
8. (MALIN+GOETZ) Ihe nchacha ihu mkpụrụ osisi mkpụrụ osisi grepu
Mgbe ọ bụ dị mma maka ụdị anụ ahụ niile, ọ na-adị irè karịsịa maka akpụkpọ mmanu mmanu. Ị ga-enweta ihicha nke ọma nke na-agaghị ahapụ gị nkụ. Nke a bụ ihe nchacha ụfụfụ nke na-enweghị kemịkalụ siri ike.
Ebu n'obi wepụ mkpụrụ osisi grepu na amino acid iji nyere aka kwado nha nha akpụkpọ ahụ. Ha nwere ike ịgụnye nke a na mmemme ụbọchị gị ma ọ bụ nke mgbede.
9. Kiehl's Facial Fuel na-enye ume ịsacha ihu
Emebere mmanụ ihu Kiehl ka ọ nwee ume, yabụ na o nwere caffeine na vitamin E menthol.
Onye na-ehicha ihe a, dị ka ahịrị mmanụ ọkụ ihu (nke bụ nnukwu ebe ịmalite maka usoro nlekọta akpụkpọ nwoke ọ bụla zuru oke), ka emebere ka iteta akpụkpọ ahụ ike gwụrụ ka ọ na-akwadebe ya n'otu oge maka ịkpụ afụ ọnụ na-enweghị isi. £ 19.50
10. Aesop Parsley Mkpụrụ nchacha ihu
A na-enye ahịrị pasili ahụ nke usoro sitere na Aesop bụ usoro nlekọta anụ ahụ kacha dabara na ntọala rụrụ arụ na nke mepere emepe, ekele maka akụrụngwa antioxidant na -akwalite.
Ọ bụ ihe dị mma na nhicha akara ụghalaahịa bụ nsacha ihu na -arụsi ọrụ ike na nke nwere ike ijikwa mmanụ na unyi.
Ọ bụ ihe ngwọta dị nro gel-textured nke na-eju anya maka ịdị irè ya.
Ihe mejupụtara ya (ewezuga mkpụrụ osisi pasili bara ụba na vitamin) nwere mgbọrọgwụ liquorice, mgbochi mkpali nke na-enyere aka ịhazi ụda akpụkpọ ahụ. Na mmanụ mkpụrụ osisi currant, nke bara uru maka nkịtị, nchikota, na akpaghasị akpụkpọ ahụ.
Ihe ndị dị egwu ịme na California
11. Jaxon Lane Enzyme ntụ ntụ na-asachapụ ihu
Ndị na -ehicha ihe abụghị mmiri mmiri niile. Ime a nwayọọ exfoliating lather, gwakọta mmiri ole na ole na ntụ ntụ n'etiti ọbụ aka gị.
O nwere enzymes mkpụrụ osisi na -apụ apụ (site na painiapulu na pọpọ) nke na -ewepụ akpụkpọ ahụ nwụrụ anwụ ma na -ekpughere ọmarịcha akpụkpọ gị. Nakwa vitamin C, E, B3, na B5, nke na -arụkọ ọrụ ọnụ iji nye gị ahụ dị nro, dị larịị, na -enwu gbaa.
12. Ndepụta inkey edepụtara ihe nhicha ọcha salicylic
Ndepụta Inkey, nke Mark Curry na Colette Laxton guzobere na ụkpụrụ ụlọ ọrụ siri ike.
Na-achọ iwepu okpu okwu na ịdị mgbagwoju anya na nlekọta anụ ahụ yana azịza nke nsonaazụ na-arụpụta nke nwere ọrụ siri ike na ihe okike na oke ọnụ ahịa dị ọnụ ala (ihe niile dị n'okpuru £ 15).
Site na iji ngwaahịa Inkey na -ere sekọnd iri atọ ọ bụla, echiche ụlọ ọrụ ahụ nke idobe ọnụ ahịa ka ndị ahịa wee nwalee ihe ọhụrụ na -akwụ ụgwọ nke ọma.
Companylọ ọrụ ọsụ ụzọ na-etinyekwa arụmọrụ dị elu (dị ka retinol ma ọ bụ hyaluronic acid) n'ihu na etiti na nkwakọ ngwaahịa ya yana nchịkọta ihe eji eme ihe.
Ihe nchacha ihu a na-ekpochapụ unyi nke ọma ma wepụ pores iji belata ọdịdị nke pores gbasaa ma jikwaa mmanụ karịrị 2% salicylic acid, beta hydroxy acid (BHA) dị ike.
BHA bụ kemịkalụ kemịkalụ na-adịghị ala ala nke jikọtara ya na zinc iji nyere aka belata mmepụta sebum na allantoin, nke nwere ihe mgbakasị ahụ na ichebe ihe.
Ọ kacha mma maka ụdị akpụkpọ anụ ndị nkịtị.
Ngwọta a na-adịghị ehicha, nke na-afụ ụfụfụ dị mma maka onye ọ bụla na-enwe ihe otutu ma ọ bụ isi ojii na enwere ike iji ya ehihie na abalị. 150ml na -akwụ £ 10.99.
13. Susanne Kauffman Cleansing Gel
Nke a bụ ihe nhọrọ magburu onwe ya maka ụdị anụ ahụ niile, mana ọ dabara nke ọma maka nchikota na akpụkpọ anụ.
Ndị na -ewu ewu na -ewu ewu, mana ọ bụghị naanị gimmick.
A na-eji ahịhịa alpine mee ya na ihe ndị nwere ike ime ka ị na-asachapụ nwayọọ nwayọọ. Ihe nchacha a dị mma maka ịgwọ obere ntiwapụ na mgbakasị ahụ.
14. Cetaphil Nwayọọ Nchacha Kwa Ụbọchị
Ọ dị mfe ịchụpụ nlekọta anụ ahụ nke ọtụtụ mmadụ mepụtara, mana ọtụtụ mgbe nhọrọ kachasị ọnụ ahịa na-abụkwa nke kachasị dị irè.
Jiri nke a sachaa n'ụtụtụ, mgbede, na mgbe mgbatị ahụ gasịrị onye na -ehicha ụfụfụ hypoallergenic, nke na -enweghị ncha na agba.
Nke a bụ otu ụlọ ahịa ọgwụ mara mma nke na -agaghị ahapụ gị ka akpịrị kpọrọ nkụ.
15. Dr. Jart Cicapair Tiger Grass Enzyme Foam Cleanser
Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe okike, enweghị nsogbu, yana mmezi anụ ahụ, agala karịa Dr. Jart, otu nzuzo mara mma Korea.
Ha gbakwunyere ihe na -eme ka ahịhịa tiger dị na nso nso Cicapair nke ụlọ ọrụ ahụ, usoro ngwaahịa pụtara iji mee ka ahụ akpụkpọ ahụ na -ewe iwe ngwa ngwa kwụsị.
Mmetọ, mgbanwe ihu igwe, enweghị ụra, na ọbụna ebe ndị mmadụ juru eju nwere ike ime ka ihe mgbochi mmiri akpụkpọ ahụ ghara itisa.
Mgbe ị gbakwụnyere usoro nhicha anụ ahụ siri ike na nke siri ike na ngwakọta, ihe nwere ike ịka njọ.
Emebela ịsacha ihu mmekpa ahụ nke Dr. Jart's Cicapair dị ka onye na-asachapụ ụfụfụ dị oke ala na-eburu nke a n'uche.
Ọ dị nwayọ maka iji ya kwa ụbọchị, ọbụlagodi maka mkpụrụ obi kacha nwee mmetụta, yana glycerin na -eme ka mmiri dị oke mmiri, na ebumnuche nke ịdị jụụ, izu ike na iweghachi akpụkpọ ahụ ka ọ na -arụ ọrụ nke ọma.
Ọ gụnyekwara Cicabond, mmiri na -emeju mmiri. Na Jartbiome, Dr. Jart naanị probiotic ferment ingredient (na -eji teknụzụ microbiome ọhụrụ sitere na Korea) mee ka akpụkpọ ahụ dịghachi mma ma mee ka ihe mgbochi mmiri sitere n'okike sie ike.
16. Clarins ji nwayọọ na -eme ka ọ dị ọcha Mousse
Clarins'nchịkọta nke ndị ọkachamara na -asachapụ (enwere asaa na mkpokọta).
Ejikwa ụdị akpụkpọ anụ dị iche iche wee mepụta ụda ụda ma jiri ihe nrịba ahịhịa dị narị 100 sitere na ugbo Alpine nke ika ahụ na ụlọ nyocha ikuku (Le Domaine Clarins).
Nke dị na elu mita 1,400 na Alps French na enweghị mmetọ na ikuku ma ọ bụ ala.
Ihe nchacha ihu a nwere mousse-textured, nke nwere ụfụfụ nke ukwuu na-asachapụ nke ọma mgbe ọ na-akwado microbiome akpụkpọ ahụ dị mma. Mgbagwoju anya dị nro, ngwakọta ahịhịa ahịhịa Alpine 100 na-eme ka ahụ dị jụụ ma na-eme ka akpụkpọ ahụ dajụọ, bụ ihe Clarin mepụtara.
Iji gbakwunye ịdị ọhụrụ, a na -agwakọta ya na ụzọ ihe ọkụkụ nwere ike: organic gentian gentian na organic lemon balm.
Iji nyere aka ịkwanyere ahịhịa eke anụ ahụ ùgwù, a na -ahọpụta ncha ahịhịa, ahịhịa nke nwere ikike ịfụ ụfụ nke ọma, na saponins, nke na -arụ ọrụ dị ka ndị na -ehicha ihe eke.
ọ bụ adabara ụdị anụ ahụ niile, dị nwayọọ maka iji ya eme ihe kwa ụbọchị, ọ ga -ahapụkwa akpụkpọ ahụ gị ka ọ na -enwu karịa.
Ha na -eme ka ọ mịpụta mkpụrụ osisi tamarind pulp - nke nwere AHA iji kpochapụ akpụkpọ ahụ - ma dabara maka ụdị akpụkpọ ahụ niile, dị nro maka iji ya kwa ụbọchị, ọ ga -ahapụkwa agba gị ka ọ na -enwu gbaa.
17. Onye toro Alchemist Hydra + Mmanụ-Gel na-ehicha ihu
Ọ dịbeghị oge ịlụ ọgụ maka mgbaàmà ịka nká na akpụkpọ ahụ gị. Elu ya jiri nke a sachapụ mmetọ jel ka milky cleanser.
O nwere ọtụtụ ihe mejupụtara ya, gụnyere squalane na ọtụtụ antioxidants na abụba abụba, ha niile nwere ike inye aka belata ọmarịcha ahịrị na ndọlị.
Ọ na -agbakwa mmiri mmiri, nke na -enyere aka n'ịdozi akpụkpọ anụ dị mma.
18. Ụlọ ahịa anụ ahụ Aloe Cream Cleanser
Aloe na -agba mmiri ma na -eme ka ihu dị nro N'ime ọtụtụ ebumnuche a, ihe nchacha ude. Ọ bụ ezigbo nkwado maka usoro nlekọta anụ ahụ gị mgbe otu ụbọchị nọrọ na anyanwụ.
Ọ bụ ezie na emebere ya maka ihu (nke nwere mmetụta karịa nke ahụ niile), enwere ike iji ya na mpaghara ọkụ gbara ọzọ.
19. Nivea Men Deep Impact Face na afụ ọnụ
Igwe ojii na -asacha ihu nke ọma na -asachapụ akpụkpọ ahụ gị na ntutu ajị agba gị. Ọ na -asachapụ akpụkpọ ahụ nke ọma, na -ewepụ ihe na -emetọ emetọ, nsị, na mmanụ oke. Ihe mejupụtara ya na -ekwe nkwa na akpụkpọ ahụ na -adị mma nke ọma ma na -eme ka ọ dị ọhụrụ na -enweghị oke nkụ.
Ihu a na -asacha afụ ọnụ na -enyere aka n'iwepụ mmetọ. Ọzọkwa, ịsa ihu na afụ ọnụ a na -asachapụ akpụkpọ ahụ gị site na iwepu mmanụ na irighiri ihe.
20. Àgwà ọjọọ na-akpọte Ihe Up Matcha & Mint Daily Cleanser
Omume adịghị mma anyị nwere ike bute ahụike akpụkpọ ahụ anyị.
Oge ihuenyo nke ukwuu, iri nri dị mma, na ehighị ụra nke ọma bụ naanị ihe atụ ole na ole.
Bad Habit, ụlọ ọrụ na-ahụ maka nlekọta akpụkpọ anụ ngwakọ dabeere na Los Angeles. Onye ndu onye nnọchi anya ika zuru ụwa ọnụ, onye isi ihe okike, na nnukwu onye na-emetụta Emma Chamberlain ka emepụtara iji mezie mmebi nke omume akpachapụghị anya anyị kpatara.
Ngwaahịa a na-enye ụdị usoro nlekọta anụ ahụ kwa ụbọchị yana azịza ngwa ngwa ezubere iche, nke etolitere nke ọma iji mee ka akpụkpọ ahụ nwere nchekasị kwụsịlata ma belata mbufụt, ọ bụkwa ọkacha mmasị n'etiti Gen Z na ihe otutu na-adịkarị mfe na puku afọ.
Ihe ejiri mara ya bụ Wake Things Up asacha ihu bụ pH nwere nguzozi, na-adịghị asachapụ ụtụtụ.
A na-ejupụta ihe nhicha ụfụfụ na-enye ume ọhụrụ ihe ndị na -arụsi ọrụ ike gụnyere detoxifying matcha green tii (nke na -enye akpụkpọ ahụ nkwalite antioxidant) na mmiri aloe vera (nke na -eme ka akpụkpọ ahụ dị nro ma dị larịị).
Yana ngwakọta nke mint na neroli mmanụ dị mkpa iji teta uche. Ọ na -enye ume ma na -enye nhicha miri emi n'ebughị iwe. Ọ dabara maka ụdị anụ ahụ niile, enweghị sulfate, yana vegan.
a onye nchacha ọgwụgwọ na-ewu ewu n'etiti ndị nwere ụda akpụkpọ ahụ gbara ọchịchịrị. Ha mepụtara ya iji gboo nsogbu gụnyere akpụkpọ ahụ na-acha abụba na ụda na-enweghị isi.
Ọ na-agbapụ ma enwere ike iji ya dịka nkpuchi nkeji ise; ihe ndị na -arụ ọrụ dị ka niacinamide na salicylic acid na -enyere aka ịkwalite ọdịdị akpụkpọ ahụ ka oge na -aga. Agbanyeghị, maka itinye ngwa na ịchekwa ihe dị mfe, a na -etinye mmanya n'ime ite.
22. Neutrogena Ultra ji nwayọọ na -ehicha ihu
Kama iwepụ mkpụrụ ndụ akpụkpọ anụ nwụrụ anwụ na-egbu egbu, ọtụtụ exfoliating ọcha Jiri salicylic ma ọ bụ lactic acid gbarie ha.
Ọzọkwa, nke a bụ usoro ọkachamara, ma ọ bụrụ na ị nwere akpụkpọ anụ, zere ya.
Kama nke ahụ, jiri nsacha anụ ahụ dị nro, dị ka nchacha dị ọcha, nke na -ejikọ usoro nlekọta anụ ahụ abụọ n'ime otu (yabụ akpụkpọ ahụ gị na -atachi obi ọkara nsogbu). Ọ bụrụ na ị na -ete ya nwayọ, ọ ga -adị mma ka ị na -eji ya mgbe niile.
23. Ndị nwoke Garnier na -eche ihu ịsa asacha ọcha
Ncha ihu Dual Texture nke mbụ Garnier n'ihi na ụmụ nwoke bu n'obi ikpochapụ uzuzu na ihe na -emerụ emerụ ma na -enyekwa akpụkpọ ahụ ọdịdị mara mma.
Ha gbakwunyere salicylic acid na vitamin C na uzommeputa iji kpochapụ akpụkpọ ahụ gị n'isi ma wepụ ihe na-adịghị mma. Ọ na-asachapụ nke ọma ma kpochapụ mmanụ.
Ọzọkwa, a na -amata salicylic acid na vitamin C ka ọ na -agbari ma na -ebelata nsụkọrọ na akpụkpọ ahụ, n'otu n'otu. Ọzọkwa, ọ na -asachapụ akpụkpọ ahụ nke ọma, na -ewepụ mmanụ, nsị, na mmetọ. Ma emesịa, akpụkpọ ahụ na -apụta karịa, na -enwu enwu, ma na -adị ọhụrụ kwa ụbọchị.
24. Ịchọ ọdịmma onwe onye site na Hyram Centella & Green Tea Daily Gel Cleanser
Usoro nlekọta akpụkpọ anụ ọhụrụ a na-arụkọ ọrụ site na Ndepụta Inkey (ihe sayensị na-eme, ihe na-efu ọnụ). Na Hyram Yarbro nke nwere nnukwu akpụkpọ ahụ nọ na ebumnuche ịkwalite mgbanwe mmekọrịta ọha na eze site na iji ikpo okwu Yarbro (ya na nde mmadụ iri na abụọ na -eso ya) iji bulie mmata na ndị otu na -akwado akụkụ anọ a niile.
Agbanyeghị, ọ bụ ngwaahịa nlekọta anụ ahụ dị nro ma dịkwa irè nke a ga -emekwa ka ọ dị mma ka ị na -eji ejiji. Ọzọkwa, ihe a na-eme kwa ụbọchị, ịsa ihu ihu jel na-eme ka mmiri dị ọcha ma na-asachapụ nke ọma maka afọ niile na ụdị akpụkpọ ahụ.
Ọzọkwa, ejirila ụzọ juputara antioxidant juputara na 5% Green Tea Complex iji mee ka obi dajụọ ma belata ọbara ọbara. Na 3% Centella Asiatica Complex iji mee ka akpụkpọ ahụ dajụọ.
Agbanyeghị, na-eji glycerin na-eme ka mmiri dị pasent 14.5 na ngwọta pH kwesịrị ekwesị, na-enweghị akpọnwụ ma ọ bụ na-egbochi akpụkpọ ahụ mmiri dị mkpa.
Ọzọkwa, ọ bụ vegan, enweghị nkwụ, na nhicha ọ bụla azụtara na-enyere aka ịlụ ọgụ maka mgbanwe ihu igwe site na ịchekwa oke ọhịa na mbibi, site na mmekorita ya na Rainforest Trust.
25. Superfluid Square Otu Onye Ncha ụfụfụ dị nro
Ebumnuche nke ika unisex nke ọgbọ na-abịa, bụ nke emebere n'ụlọ ọrụ gbasara dermatology nke sayensị na Italy, bụ ime ka nlekọta anụ ahụ dị mfe, na-atọ ụtọ, na enweghị nchekasị.
Agbanyeghị, njedebe maka ahịrị unisex nke na-esote bụ akpụkpọ ahụ dị mma, ọ bụghị akpụkpọ ahụ na-enweghị ntụpọ. Yabụ, n'echiche nke na ịma mma abụghị maka imezu njirisi agaghị ekwe omume.
Ọfụfụ na -a attentiona ntị n'ihe ndị ahịa ya chọrọ. A na -echebara ajụjụ ọ bụla DM, nkwupụta, azịza na ajụjụ Instagram mgbe ị na -emepụta ngwaahịa ọhụrụ.
Square One Gentle Foam Cleanser, onye na -asacha ihu ụlọ ọrụ ọhụrụ, gafere ule ụlọ nyocha 50 na nyocha mma 200 tupu otu ahụ ekpebie ịhapụ ya.
Ọzọkwa, o nwere ihe na -ewepụta chamomile iji belata mmetụta na niacinamide (vitamin B3). Iji moisturize ka ị na -enwe ihe mgbochi anụ ahụ, yana ime ka vitamin E dị jụụ, antioxidant na -echebe sel anụ ahụ pụọ na radicals n'efu.
Ihe na-ehicha kwa ụbọchị nwere udidi mmiri dị nro, nke na-afụ ụfụ rụọ ọrụ nke ọma na-ewepụ unyi na mmetọ micro-urughuru nke na -akpaghasị microbiota anyị.
Na -ebute na mgbochi mgbochi akpụkpọ adịghị ike, pores dilated, na nkụ. Kwesịrị ekwesị maka onye ọ bụla, ọbụlagodi ndị nwere mmetụta nri, yana vegan kpamkpam.
26. Boscia na -ehicha ihe nchacha unyi ncha
a gel cleanser bụ nhọrọ ọzọ magburu onwe ya maka ụmụ okorobịa nwere mmanu mmanu. Ọ na-eji unyi na-ehicha nke ọma, nguzozi, na ibelata ọdịdị nke pores.
Anyị nwekwara ike iji ya na nchacha abụọ. Nke a bụ vegan na enweghị isi, dị ka ngwaahịa Boscia ndị ọzọ.
27. Garnier Men Power White Anti-Dark Cell Fairness Face Wash
Site n'iwepụ ihe ndị na-adịghị ọcha, ihe mmetọ na mkpụrụ ndụ nwụrụ anwụ. Garnier Men FaceWash a na -ahụ anya na -enwu gbaa akpụkpọ ahụ. Ngwọta mgbochi mmetọ ya, nke gụnyere mmiri mkpụrụ vaịn anti-oxidant, na-ewepụ adịghị ọcha na ihe ndị na-emerụ emerụ.
Ọzọkwa, ọ na-ewepụ mkpụrụ ndụ nwụrụ anwụ ojii ma na-eme ka akpụkpọ ahụ na-enwu gbaa nke ọma site na iji mpekere lemon na-egbuke egbuke na obere bekee micro-polishing.
Tụkwasị na nke ahụ, a na-eji mmiri mkpụrụ vaịn na-emegide ihe na-egbu egbu mee ihe ọ drinkụ thisụ a. Ọzọkwa, a na -ewepụ ihe na -adịghị ọcha na ihe mmetọ. Agbanyeghị, mkpụrụ osisi lemon na -enyere aka wepu sel akpụkpọ anụ nwụrụ anwụ.
28. Garnier Men Acno ọgụ ihu saa
The Garnier Agnofight na -alụso ihe mgbaàmà acne isii ọgụ nke ọma. Maka njikwa mmanụ nke ọma, ngwọta a nwere ihe ndị sitere n'okike.
Otú ọ dị, n'ihi nke a, akpụkpọ ahụ gị na -adị ọcha, na -ehicha nkụ ma na -adị ọhụrụ. Micro-beads na-ehichapụ akpụkpọ ahụ, na-ewepụ isi ojii, na-ewepụkwa oghere ọnya.
Ihe ndị a sitere n'okike abụghị naanị na -ebelata nzuzo mmanụ kamakwa na -emegharị ma na -eweghachi akpụkpọ ahụ gị. Ọ gụnyere salicylic acid, nke nwere mmetụta antibacterial na nhicha.
Ụfọdụ Uru Ọrụ Salicylic & Uru Herba rụziri. Ọzọkwa, ọ nwere njikwa mmanụ sitere na gel. Na arụ ọrụ na Pimples nke kpọrọ nkụ
Ọzọkwa, a na -ewepụ ntụpọ ojii, a na -emechikwa oghere pores. Ọ na -enwukwa akara ma belata Redness
29. Acqua Di Parma Barbiere Nsacha ihu kwa ụbọchị
Akua Di Parma, ụlọ ahịa Italiantali na-arụ ọrụ aka nke tọrọ ntọala na 1916. Ọ na-esi ísì ọma ya dị elu, na-achọ mmekorita pụrụ iche, yana usoro na-eme ka ahụ dị jụụ.
Asachapụ a na -enye ume bụ otu n'ime ihe mgbakwunye ọhụrụ abụọ na ụdị ihu ihu, ịkpụ afụ ọnụ, ajị agba na ntutu ntutu nke ADP. Nke bụ maka ụmụ nwoke ma bụrụkwa nke ọdịnala ịkpa oke Ịtali sitere n'ike mmụọ nsọ.
Ọzọkwa, o nwere akara ụghalaahịa Colonia senti, nke na-enye ya mmetụta nke nkasi obi na ịdị ọhụrụ ozugbo.
Ngwakọta dị nro dabara adaba maka ụdị anụ ahụ niile yana ezubere maka iji ya eme ihe kwa ụbọchị. Ọ na -ewepụ mmetọ, unyi, na unyi nke ọma na -emerụ ahụ ma ọ bụ ihicha anụ ahụ.
N'ezie, ọ na-arụsi ọrụ ike hydrates akpụkpọ ruo awa isii mgbe ngwa. Kedu nke dị mma maka ahụike akpụkpọ anụ mana ọ bụghị ihe kpatara ị ga -eji na -awụpụ moisturizer.
Mmanụ mkpụrụ osisi ugu na D-panthenol (ha abụọ na-eme ka mmiri dị ukwuu), wepụ elderflower (nke bụ astringent na rejuvenating), na ịmegharị rosemary wepụ ihe niile na-arụkọ ọrụ ọnụ iji mee ka pores dị ntakịrị na ọka akpụkpọ ahụ na-eme ka ọ dịkwuo mma.
Mgbe ejikọtara ya na nke ọhụrụ Ude ụbọchị Multi-Action. 100ml na -akwụ £ 28.
Ụmụ anụmanụ kacha maa mma
30. Ndozigharị akpụkpọ anụ ji nwayọ na -ehicha ude
Dr. Heather Rogers nke Ọkpụkpụ akwara nke oge a, otu n'ime ndị dibịa m tụkwasịrị obi nke ukwuu site na ntinye ngwaahịa, na -atụ aro ka ude mmiri dị nro dị nro maka ọtụtụ ndị ọrịa nwere akpụkpọ anụ ahụ.
Ọ na -eji amino acid apple ebuli mmanụ tupu ọ mee ka ọ dị nro ma mee ka mmiri hichaa ya na chamomile na algae extracts.
31. L'Oreal Paris Men Expert White Activ Brightening Foam
Ọkachamara L'Oreal ọkachamara White Activ Ọfụfụ na-acha ọcha na-acha ọcha bụ ihe pụrụ iche nke na-enyere mmadụ aka iwepụ mkpụrụ ndụ akpụkpọ anụ nwụrụ anwụ, na-eme ka ọdịdị ha na-enwu gbaa.
Ude mmiri a na -akwalite mkpochapụ mkpụrụ ndụ akpụkpọ anụ nwụrụ anwụ. Ọ na -eme ka akpụkpọ ahụ dị ọcha ma mee ka ọ yie ihe na -enwu enwu site n'iwepụ adịghị ọcha niile.
Ọzọkwa, ọ nwere usoro nchebe na-arụ ọrụ. Ma nke a bụ ihe na-eme ka ahụ́ ruo mmadụ ala nke na-enyere aka mee ka akpụkpọ ahụ si na-eguzogide ndị na-eme ihe ike kwa ụbọchị, na-ebute mbelata njigide na nkasi obi ka ukwuu.
Ọzọkwa, ya Pro exfoliation bụ ike peeling gị n'ụlọnga. Ọ na-enyere aka mee ka ezughị okè dị n'elu akpụkpọ ahụ dịkwuo mma ma na-akwado ikpochapụ mkpụrụ ndụ akpụkpọ ahụ nwụrụ anwụ.
Tụkwasị na nke ahụ, ọ na -ewusi ihe nchebe anụ ahụ ike. Ma jiri nwayọ na -asachapụ ma na -enwu gbaa akpụkpọ anụ ozugbo. Ọzọkwa, ọ na -enwu enwu kwa ụbọchị
32. Caudalie Micellar Mmiri nhicha
Mmiri micellar nwere ike ịmata gị ma ọ bụrụ na ị na -eji ya maka nhicha ugboro abụọ.
Ọ bụ akụkụ dị mkpa nke usoro nlekọta anụ ahụ nwere ọtụtụ nzọụkwụ. Enwere ike iwepụ ihe fọdụrụ na ngwaahịa, nsị na mmanụ site na iji ihe nchacha a anaghị ekpocha ya.
Mmiri grape, chamomile, na glycerin sitere na Caudalie na -ekwu na ọ na -emegharị akpụkpọ ahụ. Maka ndị na-achọ ịma mma na nlekọta anụ ahụ, mmiri micellar a ga-enwerịrị.
33. Fulton & Roark afthhave Cloth
Akwa ndị a, nke bụ a ọkara ọcha na akụkụ toner, jiri nwayọọ dozie akpụkpọ ahụ mgbe ọ bụla akpụchara ya. A na -eji mmanụ osisi tii na amoosu eme ihe na -ehicha ma na -ehichapụ pores, ebe a na -eji eucalyptus mee ka ahụ dị nro.
Ọbụna ma ọ bụrụ na ị naghị akpụ afụ ọnụ, ị nwere ike ịkpọrọ ha gaa mgbatị ahụ ma ọ bụ maka izu ike n'oge nri ehihie.
Nke a na-enye ume, na-ehichapụ akpụkpọ anụ kwa ụbọchị Nke Kiehl bụ ihe na-akpali akpali, ihe ngwọta na-enweghị mmanụ emepụtara iji dozie nsogbu ndị sitere na oke mmepụta sebum kpatara.
Ọzọkwa, ọ na -ewepụ ihe ruru unyi, mmanụ, na mmetọ na -enweghị ihe mgbochi, ihicha, ma ọ bụ mebie epidermis. Ọ dịkwa mma maka ụdị akpụkpọ anụ nkịtị na mmanu mmanu.
Ọzọkwa, o nwere udidi jel dị nro, teknụzụ na-agba ụfụfụ ngwa ngwa, a na-enye ya botanicals abụọ: mwepụta ahịhịa n'ọzara na aloe vera.
Mkpụrụ osisi lemon, nke siri ike na vitamin C ma mara na ọ nwere mmetụta astringent yana gụnyere nnukwu potassium maka ịgbara mmiri ozugbo na ogologo oge.
Agbanyeghị, ọ ga -ebelata oke mmanụ n'elu akpụkpọ ahụ mgbe ejiri ya n'ụtụtụ na abalị, na -eme ka ọ nwee ume ọhụrụ na echiche ziri ezi. Ọ dị nwayọ iji kwa ụbọchị ọ dịkwa mma maka akpụkpọ ahụ siri ike. Maka 150ml, ọnụ ahịa ya bụ £ 18.
35. Ịdị ọcha nke Avène
Avène dị nro ma ọgwụgwọ ndị dị oke mma na -enwe mmetụta izu ike karịsịa na akpụkpọ ahụ na -ewekarị iwe.
Ekele maka mmetụta na -atọ ụtọ nke mmiri iyi mmiri na ntinye onwe ya n'inyere ndị mmadụ aka na -ata ahụhụ.
Akụkọ ahụ malitere na 1736 n'otu obere obodo dị na ndịda France. Mgbe ịnyịnya Marquis de Rocozel mepụtara pruritus na -adịgide adịgide wee gwọọ ya ka ọ mikpuchara n'ime mmiri Orb.
Nke a bụ ka esi achọpụta àgwà dị jụụ nke mmiri iyi Avène thermal. E tinyela ya na nke ọ bụla n'ime usoro ndị a.
Ọzọkwa, nke a Gel nhicha dị nro nke nwere ebumnuche abụọ, dị mma maka ma ahụ ma ihu, dị ọhụrụ na nchịkọta. Karịsịa (ma ọ bụghị naanị) bara uru maka akpụkpọ ahụ nwere mmanu mmanu na nke nwere mmerụ ahụ n'ihi na ọ na-arụ ọrụ ụlọ ọgwụ na-ekpochapụ ihe ndị na-emerụ emerụ na ibelata oke sebum.
Ọzọkwa, o nwere ntọala na-enweghị ncha nke nwere oke mmiri nke mmiri iyi mmiri na-eme ka ọ dị nro ma na-eme ka ọ dị nro, nke na-enyere aka kwalite epidermis nke a nụchara anụcha.
Nwere pasent 84 ihe ndị sitere n'okike wee tinye ya na mgbagwoju anya Comedoclastin na-arụ ọrụ ọhụrụ yana ikike.
Na -enweghị mgbakasị ahụ ma ọ bụ ọbara ọbara, ihe mejupụtara biodegradable na -eme ka akpụkpọ ahụ nwee mmetụta dị ọcha, dị ọhụrụ ma dị ọcha.
36. La Bella Figura dị ọcha Slate Rinsable Cleans Concentrate
Balm a na -ete ude na -asachapụ akpụkpọ ahụ nke ọma n'ewepụghị ya. Ihe mejupụtara ya bụ ihe mejupụtara ihe mejupụtara ya, ụlọ ọrụ wepụtara ya maka nlekọta akpụkpọ anụ na ịma mma.
Balm a na -enye nhicha nke ọma yana ezigbo ahụike, na -enwu gbaa. Ọ dị egwu dịka nkpuchi mmiri ịsa ahụ tupu ịsa ahụ.
37. Ajụjụ + Onye na -agba ose kwa ụbọchị
a onye na-ehicha mint bụ ụzọ dị egwu iji malite ụbọchị 'apụ' n'ihi njirimara nkwado ya na ume ya.
Ọ bụ ngwaahịa na -eme ka mmiri dị nro ma dị nro nke emebere iji kwanyere oke okike nke anụ ahụ gị ùgwù.
Ọzọkwa, ọ dịghị mmanya na-aba n'anya (ya mere ọ gaghị akpọnwụ mmiri), onye anaghị eri anụ na-enwe mmasị na ya, yana ihe ndị nwere ike ime ihe ọkụkụ juru. Akpụkpọ ahụ 'mma' bụ isi ebumnuche nke ụlọ ọrụ nlekọta akpụkpọ anụ Britain a dị ọcha na nke lekwasịrị anya.
Nke a pụtara ìhè n'ụzọ kwụ ọtọ ya na ojiji nke ihe mgbochi mkpali, nke na-eji pasentị 98.2 sitere n'okike.
Mmanụ akwụkwọ osisi pepemint, nke nwere uru dị ọcha nke okike na ọgụ nje na-akpata mmerụ ahụ, na-ebute ụzọ, nke coco sulfate na-akwado (kemịkalụ sitere na fatty acids nke mmanụ aki oyibo).
Ọzọkwa, dị ka ihe ọzọ SLS (kemịkalụ a na -eji enye ihu na -asachapụ larịị ha), nke nwere ike bute nkụ na mgbakasị ahụ.
Ọ dabara maka ụdị akpụkpọ ahụ niile, site na mmanu ruo na nkụ, nchikota ruo na nke nwere mmetụta, ọ dabere na mmiri karịa mmanụ. 125ml na-efu £ 7.50.
Igwe ọdọ mmiri nke ndị ọdọ mmiri na -asacha ihu ihu bụ nsacha ihu na -enwu enwu maka ụmụ nwoke.
Ọ na -asachapụ akpụkpọ ahụ gị nke ọma wee mee ka ọ dị ọcha ma mee ka ọ dị ọhụrụ site na iwepu nsị, mmanụ na mmetọ. Ọ na -ewepụkwa unyi na mmetọ nke ọma, na -ewepụ sel akpụkpọ anụ nwụrụ anwụ ma na -eweghachi akpụkpọ ahụ ozugbo.
Ewezuga nke ahụ, infusion menthol na -enye ya ịdị ọhụrụ na ọdịdị ike. Ọzọkwa, mkpopụta kọfị kọfị na menthol jụrụ oyi na-ejikọ iji mepụta ike 2-in-1.
Ọzọ, mkpirisi agwa kọfị na-enye ìhè ozugbo. Ọzọkwa, menthol na-eme ka akpụkpọ ahụ gị dị ọhụrụ site n'ime ka ọ dị jụụ.
Ihe nchacha ihu nwere ihe mgbochi na-egbuke egbuke. Ọ na -ewepụkwa ntụpọ, mmanụ na isi ike n'elu.
39. Saa Homme ihu kwa ụbọchị
Ejiri akara akpụkpọ anụ ụmụ nwoke mee akara a, dị ka aha ya na -egosi. Igwe nhicha a na -ehicha oyi na -adịkwa jụụ, na -eme ka ọ bụrụ ezigbo nhọrọ maka ndị na -akpụ afụ ọnụ ugboro ugboro.
Ọzọkwa, ọ na -enwe mmetụta dị nro na akpụkpọ ahụ ekele mgbakwunye nke osisi tii na lavender. Nke a bụ ihe nhicha dị mma maka onye ọ bụla na -achọ ịsa ahụ na -anọpụ iche kwa ụbọchị na ọnụ ahịa ezi uche.
40. Toro Alchemist Gentle Gel Cleanser
Onye toro eto na -enye “sistemụ” ịma mma na nke zuru oke. N'ime ma ndị na -azọpụta anụ na anụ ahụ na -enweghị ike ịgụnye nke gụnyere ihe ndị na -arụ ọrụ nke egosiri iji kwalite ahụike sel anụ ahụ.
Site na mmata na nkwanye ugwu maka eziokwu na ọdịmma na ịma mma enweghị njikọ.
The Gentle Gel Facial Cleanser nke sitere na ụlọ ọrụ ahụ na-adị nwayọọ na akpụkpọ ahụ dị nro, yana ngwakọta siri ike nke ihe ndị na-emepụta ihe nke na-enye ohere ka epidermis (akpụkpọ anụ ahụ dị elu) na-eku ume na-enweghị ịdọrọ ma ọ bụ na-akpaghasị n'ígwé dị omimi.
A na-agwakọta petals rose nke oyi na-atụ (nke nwere polyphenols) na chamomile, bergamot, na ogbugbo willow iji nyere aka na-ekpochapụ pores na ịgbasa ntụpọ gbara ọchịchịrị.
Aloe vera (nke dị elu na polysaccharides) na -ebelata mgbakasị, na -ebelata ọbara ọbara, na -abawanye ịdị nro na nchapụta.
Ngwa unisex gel-to-foam na-asachapụ ma na-eme ka ọ dị jụụ, na-enye mmetụta ịka nká, ma dabara maka ụdị akpụkpọ ahụ niile. Agbanyeghị, ụmụ nwoke nwere ike họrọ ya maka ụdị ịcha mma ya. 200ml maka £ 31
Mmanụ Mmanu Ajị agba
Ihe ndị dị egwu ime na Tennessee
Ọ dị mfe iru maka onye na-ehicha ihe. Ikekwe, ị chọdịrị maka mmetụta ahụ “siri ike”, nke ahụ na -egosi mmetụta akpịrị akpụkpọ ahụ gị na -adọkpụ na ntì gị ka ị na -ehicha ya.
Mana nke ahụ bụ akara ọjọọ; ọ pụtara na onye na -ehicha gị dị oke ike nke na ọ ga -emerụ ahụ gị ahụ ogologo oge. N'aka nke ọzọ, nhọrọ ndị a siri ike dịka nwa atụrụ.
Ha na-adịgasị iche site na ihicha a na-aga ruo na ịsa mmiri ara ehi, ntụ ntụ na-ekpochapụ pore ruo ọrụ ebube na-ewepụ mmanụ. N'ihi ya, enwere ike ịnwe nhọrọ ebe a nke dabara maka ụdị akpụkpọ ahụ gị, na-ewepụ adịghị ọcha n'aka onye na-akpata ego gị.
Biko nweere onwe gị ịhapụ ikwu okwu ma nwee mmasị na ibe a. Ọzọkwa, ị nwere ike ịgwa ndị enyi gị na ndị ezinụlọ gị gbasara ya.
Tags:kacha mma ihu ịsacha maka ụmụ nwoke ngwakọta akpụkpọ, ihu kacha mma maka ụmụ nwoke akọrọ akpụkpọ, kacha mma ihu maka ụmụ nwoke na india, asacha ihu kacha mma maka akpụkpọ anụ nwere mmanu mmanu, ihu kacha mma maka ụmụ nwoke pimples, asacha ihu ụmụ nwoke kacha mma n'afọ 2021, asacha ihu ụmụ nwoke kacha mma maka ntụpọ na ntụpọ ojii, top 10 ihu ịsacha maka ndị ikom
Kedu ihe bụ Gotu Kola: Eji ya maka akpacha akpụkpọ anụ yana mmetụta ya
Ụzọ dị mfe maka otu esi eji mmanụ aki oyibo maka ọgwụgwọ sinus
Nọmba ekwentị CareSource & nkọwa zuru ezu nke ọfịs Caresource